कमजोर चुरे क्षेत्र र बलियो तस्कर सञ्जाल – Chitwan Post
कमजोर चुरे क्षेत्र र बलियो तस्कर सञ्जाल
प्रकाशित मिति: सोमवार, फाल्गुन २, २०७३
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुरे संरक्षणका पूर्वनिर्णय उल्ट्याउँदै चुरे उत्खनन् अनि ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो प्रतिबन्ध खुला गरी उत्खनन् गर्ने र निर्यात पुनः खोल्ने तयारी गरेका छन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्म क्रसर उद्योगलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिने वा २०७५ असार मसान्तसम्म फुकुवा गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुरेको विनाश रोक्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत प्राकृतिक स्रोत निकासीमा ०७१ साउन १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएका थियो । ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ का रुपमा घोषणा गरेको थियो । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा छ जना सरोकारवाला मन्त्रीसहितको समितिले मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय यसअघि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको थियो । तर, सरोकारवाला केही मन्त्रालयका प्रशासकले उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘मापदण्ड परिमार्जन नहुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गराएर साउनदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव पनि तयार गरिएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा सतहको माटो एकदमै कमजोर छ । ढुंगा–गिट्टी अत्यधिक खोस्रँदा नदीको बहाव तीव्र भएपछि माथिको माटो खस्दै जान्छ र पहिरो जाने जोखिम बढी हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा त्यस्तै भएको छ । जथाभावी खेती गरिनु र अत्यधिक ढुंगा–गिट्टी उत्खनन्ले चुरे क्षेत्रमा व्यापक पहिरो गयो । पहिरोले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुम्यो । चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई मधेसका धेरै गाउँमा इनार सुके । कतिपय गाउँमा पानीको स्रोत नभएपछि त्यहाँका बासिन्दा विस्थापित भए । वर्षामा आएको भलले बस्ती नै बगाएपछि धनुषा, सप्तरी र सिराहाका कयौँ गाउँ बस्नलायक रहेनन् । यही समस्या हेरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटकपटक ढुंगा–गिट्टी निकाल्ने मापदण्ड बनायो, तर कार्यान्वयन गर्न सकेन । क्रसर उद्योग चलाउने र तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारभन्दा बलिया थिए । क्रसर उद्योगहरुको दादागिरीका कारण मापदण्ड लामो समय निष्क्रिय रहे । कतिपयले त कुरा नबुझेर ‘नेपालको सेतो सुन भनेकै ढुंगा–गिट्टी हो’ भन्दै निकासीको पक्षमा वकालत नै गरे । तर, आम्दानीको नाममा चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको जुन प्रभावबाट उनीहरु आँखा चिम्लँदै गए । यस्तो अवस्थामा केही सीमित व्यक्तिको व्यावसायिक लाभका लागि मापदण्ड खुकुलो पारेर फेरि पहिलेजस्तै चुरे दोहन गर्न दिनु घोर राष्ट्रघात हुनेछ । यो नेपालको भविष्यमाथि नै ठूलो कुठाराघात हो ।
२०६९ सालपछि सञ्चारमाध्यममा चुरे दोहनको प्रभावबारे व्यापक रुपमा समाचार आउन थाले । त्यसको वातावरणीय प्रभाव र क्रसर उद्योगवालाको दादागिरीबारे टीकाटिप्पणी सुरू भयो । यसले सरकारलाई दबाब प¥यो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्न सरकारलाई बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरे । चुरे दोहन रोक्न सकिएन भने तराई मधेस मरूभूमीकरण हुने र आफू त्यसको साक्षी बस्न नसक्ने उनले बताए । त्यतिबेलासम्म चुरे भावरको विनाशबाट वन्यजन्तुका साथै मानिसको जीविका नै धरापमा परिसकेको थियो । प्रत्येक वर्ष हरेक नदीले हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगाएर लैजान्थ्यो । महोत्तरी, धनुषा, सिराहाका मान्छे कागजमा जमिनदार थिए, तर उनीहरुसँग खेती गर्ने जमिन थिएन । सञ्चारमाध्यमले यसलाई प्रमुख वातावरणीय मुद्दा बनाएपछि सरकारी अधिकारी चुरे संरक्षणमा काम गर्न बाध्य भए । चुरेबाट निकालिएको ढुंगा–गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात हुने क्रम व्यापक बढेको समय थियो त्यो । वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा नाकामा भारतबाट आउनेभन्दा भारततिर जाने ट्रकको लाइन लामो हुन्थ्यो । यसो गर्दा नेपालबाट सस्तो मूल्यमा भारततर्फ ढुंगा–गिट्टी गइरहेको थियो । नेपालले पाउनु पर्नेजति पैसा पाउन सकेको थिएन । निर्यात गर्दा तोकिनु पर्ने मूल्य नतोकेका कारण नेपाल सरकारको राजस्व पनि गुमेको थियो । ठेकेदारहरु त लाभान्वित थिए, तर नेपालीले केही पाएका थिएनन् । उल्टो, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको विनाश भइरहेको थियो ।
चुरे क्षेत्रमा नदीकिनारमै क्रसर उद्योग राख्दा कम लगानी र कम समयमै अकुत कमाइ हुन्छ । जुन ठाउँमा ढुंगा–गिट्टी खोस्रँदा वातावरण विनाश हुन्छ, उद्योगीहरु त्यहीँबाट ढुंगा–गिट्टी र बालुवा झिक्न उद्यत भए । तत्काल निर्यातबाट नेपाललाई केही आम्दानी भएजस्तो देखिए पनि यसको दीर्घकालीन असर ठूलो हुन्छ । त्यसको परिपूर्ति जतिसुकै लगानीले पनि हुन सक्दैन । ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् नै गर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रका खानीबाट गर्न नसकिने होइन । आन्तरिक बजारका लागि र निर्यातसमेत गर्न सकिने १३ वटा खानी सरकारले पहिचान गरेको छ । तीमध्ये कतिपय खानीसम्म जाने बाटो बनिसकेको छ । त्यो खानीबाट ढुंगा निकाले राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ । तर, चुरेबाट ढुंगा–गिट्टी तथा बालुवा निकाले चुरे र तराई मधेस मरूभूमि बन्छ । यो संसारका अन्य ठाउँको अनुभवले पनि देखाएको यथार्थ हो ।
चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा–गिट्टी निकाल्न पनि बन्देज लगाइयो । क्रसर उद्योगहरुलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागू गरियो । यो मापदण्ड किन जरूरी थियो भने त्यतिबेला धेरै क्रसर उद्योग चुरेफेद र नदीकिनारमै थिए । नदीकिनारमा क्रसर उद्योग राख्दा ढुंगा–गिट्टी खोस्रेर ट्रकमा लोड गर्दै बेच्न सजिलो हुन्थ्यो । कम लागतमै अकुत कमाइ गर्न सकिन्थ्यो । हुँदाहुँदा क्रसर उद्योगहरु चुरेफेदबाट अझ माथि उक्लँदै भित्र–भित्रसम्म जान थाले । नदीभित्रै एक्स्काभेटर हुलेर पनि ढुंगा–गिट्टी निकाल्न थाले । त्यस्ता उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले छ महिना समय दिएको थियो । पछि त्यो समय परिवर्तन गरियो, तैपनि कार्यान्वयन भएन । मापदण्डअनुसार चुरेबाट ढुंगा–गिट्टी निकाल्न पाइँदैन । चुरेफेदबाट एक किलोमिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ । यसका लागि चुरे संरक्षण विकास समितिले नक्सा नै बनाएर कुन–कुन बिन्दुबाट कति तहसम्म ढुंगा–गिट्टी निकाल्न पाइन्छ भनी किटान गरेको छ । हरेक जिल्ला विकास समितिलाई त्यो नक्सा पठाएर त्यसै आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको छ । मकवानपुर र चितवनमा भने धेरै क्रसर उद्योग चुरेफेदबाट एक किलोमिटरभित्रै पर्छन् । यसले ती दुई जिल्लाका धेरै क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भयो । विकल्पका रुपमा उनीहरुले बारा र परासीमा क्रसर उद्योग बनाउनु पर्ने थियो ।
चुरे अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । यसको आसपासमा बस्ने ६० प्रतिशत नेपालीको जीविका अहिले पनि संकटमा छ । अझ यसबाट गिटी, बालुवा निकाल्न दिने हो भने क्रसरवालाहरु र तिनलाई संरक्षण गरिरहेका केही व्यक्ति मोटाउलान्, तर गरिब झन् गरिब हुँदै जानेछन् । त्यसैले, मापदण्ड संशोधन गरेर अहिलेभन्दा बढी ढुंगा–गिट्टी खोस्रनु र त्यसलाई निकासीसमेत गर्न दिनुको कुनै अर्थ छैन । नेपालले ढुंगा–गिट्टी निर्यात नै गर्ने हो भने तीन वर्षअघि पहिचान गरिएका खानीको विकास गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र त्यो ठाउँमा जान चाहँदैन भने सरकार आफैँले लगानी गर्नुपर्छ । क्रसर उद्योगहरुलाई यसमा रूचि हुँदैन ।
हामीकहाँ क्रसर उद्योगहरुको एउटा गिरोह छ । सुरूदेखि नै पाखुरी चलाउने र दादागिरी गर्नेहरु यो उद्योगमा सहभागी हुँदै आएका छन् । त्यसमाथि, गलत नियत भएका राजनीतिज्ञहरुको उनीहरुलाई छहारी छ । कामदार आफैँ पनि ज्यालाभन्दा अरु लाभले आकर्षित छन् । कतिपय अवस्थामा मालिक नै अदृश्य हुन्छन् । गाउँलेहरुले आफ्नो बस्ती विनास भइरहेको जान्दाजान्दै विरोध गर्न सक्दैनन् । किनभने, त्यसका मालिकसँग बल र धन दुवै हुन्छ । यो एक किसिमले अपराधसँग गाँसिएको र असीमित नाफा कमाउने रक्तचन्दनको तस्करीजस्तै हो, जसमा बाहुबलको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । र, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपले राजनीतिक नेताहरुको संरक्षण हुन्छ । अहिले पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण मापदण्ड संशोधन गरेर भए पनि ढुंगा–गिट्टी उत्खनन्लाई लचिलो बनाउन खोजिएको हो । यतिबेला ढुंगा–गिट्टी अभाव छ र यसले विकास निर्माण प्रभावित हुनसक्छ भन्ने तर्क पनि दिइन्छ । यो सबै चलखेल भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारतिर भइरहेको विकास निर्माणका लागि आपूर्ति गर्न हो । यसका लागि बरू मध्यपहाडी क्षेत्रका ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जुन चुरे क्षेत्रको भन्दा गुणस्तरीय पनि छ । चुरेका गिटी त निर्माणको आधार बनाउन मात्र काम लाग्छ । मुख्य निर्माणको लागि कडा चट्टानको गिटी चाहिन्छ, जुन मध्यपहाडी क्षेत्रमा छ । तर क्रसरवालाहरु त्यहाँ जाँदैनन्, किनकि त्यसका लागि बढी लगानी र बढी मिहिनेत लाग्छ । १०÷१२ लाख लगानी गरेर वर्र्षिदनमै करोडपति हुने भएपछि उनीहरु किन बढी मिहिनेत गर्छन् र ?
चुरे संरक्षणका लागि बनेको गुरूयोजना सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसलाई उल्लंघन गर्दै चुरेबाटै ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् गर्छु भन्नु मूर्खतापूर्ण काम हो । तराई मधेसको संरक्षणका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र संरक्षणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारले पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लासम्म नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको भूभागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको हो । जम्मा ३६ जिल्लामा फैलिएको कुल संरक्षण क्षेत्र १८,९६,२५१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रफल ३,४२९ वर्गकिलोमिटर र १३२ नदी र जलाधार प्रणाली रहेका छन् । समितिको कार्यादेशमध्ये चुरे क्षेत्रका जोखिमयुक्त र अति संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षणका योजना बनाउने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कम क्षति पुग्ने गरी विकास योजना सञ्चालन गर्न त्यस्ता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने तथा तिनको सहयोग परिचालन गर्ने, गराउने मह¤वपूर्ण कार्यादेश हुन् ।
संरक्षित चुरे, चुरे–तराई मधेसको मात्र नभई सारा नेपालीको प्रमुख कार्यसूचीको रुपमा रहने हो । नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र लगानीबाट सञ्चालित यो कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगलाई व्यवस्थित गरी चुरे विनासको वर्तमान अवस्थामा सुधार तथा चुरे विनासबाट सिर्जित वा सम्भावित नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, चुरे क्षेत्रमा बढ्दो पर्यावरणीय विनासलाई न्यून गर्नका लागि विभिन्न साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा नदी प्रणालीको संरक्षण, वन, वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण र विकास तथा समुदायको जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गर्दै आइरहेको छ । उल्लिखित कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रको विनास र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नुको साथै स्थानीयस्तरमा जनसहभागिता प्रवद्र्धनमा समेत सघाउ पुगेको छ । समितिको उद्देश्यमध्ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुराता¤िवक तथा पर्यावरणीय हिसाबले मह¤वपूर्ण मानिएका तालतलैया, दह र सीमसार क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्ने, आम्दानीको उपयोग गर्ने तथा नियमित मर्मतसम्भार गर्ने कार्र्यिवधि समुदायकै परामर्शमा तयार गरी आयोजनाको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य स्वीकृत वन कार्ययोजनाअनुसार गर्ने गरी सुम्पने नीति भएबाट पनि मानवसहितको चुरे संरक्षणप्रतिको समितिको प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गरेको छ । सफल चुरे संरक्षणको श्रेय केवल संरक्षण विकास समितिलाई मात्र दियौँ भने यो एकाङ्गी हुनेछ । समितिका साझेदार सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक संस्थालगायत बुद्धिजीवी र स्थानीय समुदाय सबै यस सफल यात्राका सारथि हुन् ।
यसै सफल मोडेलबाट हौसिएर समितिले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को कार्यक्रमसमेत स्थानीयस्तरका सबै सरोकारवाला, साझेदार निकाय र लाभग्राहीको समेत सहभागितामा तर्जुमा गरेको छ । चुरे, भावर, भित्री मधेस र तराई मधेसमा आसन्न जोखिम कम गर्न, प्राकृतिक सम्पदा तथा परिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण हेतु चुरे क्षेत्रबाट उद्गम भई बग्ने नदी तथा जलाधार प्रणालीलाई आधार बनाई ३१ जिल्लामा स्थानीयस्तरमा वन, भू–संरक्षण, वनस्पति, कृषि र पशुविकास तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय र सम्बन्धित उपभोक्ता समूह तथा लाभग्राहीको संलग्नतामा एकीकृत योजना तर्जुमा गरिएका छन् । तराई मधेसका समथर कृषियोग्य भूमिलाई मरूभूमीकरण हुनबाट जोगाउनका लागि सरकारले चौँथो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै यसको संरक्षणलाई मह¤व दिँदै आएको र आ.व. २०६७÷०६८ देखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तत्पश्चात् एउटा छुट्टै निकायको रुपमा २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको हो । कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्षको अनुभवबाट सरकारको एकल प्रयास र सानोतिनो कार्यक्रमले पर्याप्त नहुने देखेर नै समितिले यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकार, स्थानीयस्तरका सबै गैरसरकारी संघसंस्था, सरोकारवाला, साझेदार निकाय, स्थानीय राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज सबैको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य ठानी सोहीअनुरुप योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
एपेक्स डिजिटलले ल्यायो भ्यालेन्टाइन अफर